LusciousMakeup Collection - Ultimate Face Case -5PC Set | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး Kaymu စတိုး Kaymu ဖက်ရှင် Kaymu အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး Kaymu ဖုန်းများ Kaymu တက်ဘလက်များ Kaymu ကွန်ပြူတာများ Kaymu ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Kaymu ကင်မရာများ Kaymu ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ Kaymu အိမ်သုံးပစ္စည်းများ Kaymu စားသောက်ကုန်များ Kaymu ကားပစ္စည်းများ Kaymu အားကစားပစ္စည်းများ Kaymu ကလေးများအတွက် Kaymu ဘာသာရေးပစ္စည်းများ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S ဖုန်းများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ (၈"အောက်) တက်ဘလက်များ (၈"နှင့်အထက်) ၀ိုင်ဖိုင်ကွန်ယက် ဖုန်းကွန်ယက် iPadများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အခြားပစ္စည်းများ TOP BRANDS APPLE SAMSUNG XIAOMI ACER WAINFORD ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ ကလေးများအတွက် အသုံးအဆောင်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ အားကစားပစ္စည်းများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး မိတ်ကပ် အလှပြင် ပစ္စည်းများ Luscious Makeup Collection - Ultimate Face Case -5PC Set Luscious Makeup Collection - Ultimate Face Case -5PC SetBy Luscious ပစ္စည်းအကြောင်းမှတ်ချက်ရေးရန် > အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများLuxurious set of5professional grade Face brushesCome with an easy to clean, yet trendy, quilted pouchLarge Powder Brush: Ultra soft, rounded brush for blending your makeup, applying loose powder or blush. Natural fibers.Angled Blush Brush: For applying blush or face contouring. Natural fibers.Stippling Brush: A flat-topped brush to create an airbrush-effect on skin. Can be used with powder or liquid products like foundations, shimmers and blush. Mix of synthetic and natural fibers.Foundation Brush: For smooth and mess-free application of liquid or cream foundation. Synthetic fibers. Ks 63,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ Nuxe Myanmar ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ကြောင့်ပို့ဆောင်ချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု ဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များသုံးသပ်ချက်များဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်းUAE နိုင်ငံအခြေစိုက် Luscious အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး UK, ပါကစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများ၌ ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိပါသည်။ Lusciousအမှတ်တံဆိပ် အလှကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံအား နာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ၊ မိတ်ကပ်အလှပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းတိုင်ပင်ကာ ထုတ်လုပ်ထားသည့်အပြင် ပစ္စည်းအရည်အသွေးအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တင့်သောကြောင့် အာရှတိုက်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံများတွင် နာမည်အလွန်ကြီးသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလှကုန်ပစ္စည်းများအား ဆန်းသစ်သောဖော်မြူလာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားရုံသာမက မည်သည့်အသားအရေနှင့်မဆို သင့်တော်စေမည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုထားပါသည်။ Luscious အလှကုန်ပစ္စည်းများ၏အစွမ်းသတ္တိသည် သင်၏မျက်နှာနှင့်အသားအရေအား သိသာထင်ရှားစွာ လှပစေမှာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုမှာလည်း သေသပ်သောကြောင့် လက်ဆောင်ပေးရန်လည်း အလွန်သင့်တော်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် Luscious အမှတ်တံဆိပ်အလှကုန်ပစ္စည်းများသည် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်များနှင့် အလှအပနှစ်သက်သူများ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံထားရပြီဖြစ်သောကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း၌ တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အဓိက အကြောင်းအရာများLuxurious set of5professional grade Face brushesCome with an easy to clean, yet trendy, quilted pouchLarge Powder Brush: Ultra soft, rounded brush for blending your makeup, applying loose powder or blush. Natural fibers.Angled Blush Brush: For applying blush or face contouring. Natural fibers.Stippling Brush: A flat-topped brush to create an airbrush-effect on skin. Can be used with powder or liquid products like foundations, shimmers and blush. Mix of synthetic and natural fibers.Foundation Brush: For smooth and mess-free application of liquid or cream foundation. Synthetic fibers.Double-Ended Concealer Brush: Featuresapointed brush for precision concealing of blemishes/marks andaflat brush specially designed for under-eye concealer application. Synthetic fibers.Additional shipping fees will be charged.ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Makeup Collection - Ultimate Face Case -5PC Set SKULU093HBAAFWCNAFAMZ မော်ဒယ်လ်5-311 Weight (kg)0.25မှတ် (0)4 မှတ် (0)3 မှတ် (0)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)